ingilazi babelibiza ifilimu zokuzivikela for the screen Nillkin Amazing H for BlackBerry Passport — Everything for BlackBerry. InfoResheniya / bbry.net
Terminator isikrini sakho! The latest Ukuthuthukiswa — ifilimu-glass, ukwazi emangalisa ngezici zawo Amazing! Glass — ngenxa yokulandelana kwayo ngokohlu, it ngempela has ingilazi esindayo-duty camera enezingxenye ezihlukahlukene zokuzivikela. It has umphumela we GorillaGlass, okuyinto umnikazi Passport isivele ajwayelekile. Namathela lokhu ifilimu, uyobe wenze smartphone yakho njengomuzi ongangeneki ngokuphelele! Le nsiza wanelise amathemba abanikazi kushaqisa kunazo, ngoba le filimu akesabi lutho njengoba kungazange kumangaze kungase kuzwakale.
Amazing H siqukethe 5 izingqimba, kuhlanganise:
anti-shock enamathela evimbela ukubukeka zezingcezwana
super esobala enamathela anti-lembhali,
abahle abicah ungqimba
enamathela oleophobic phezu
Zonke izingqimba zihlanganiswa futhi iso engabonakali, kodwa ukunikeza imiphumela kumnandi. Uzenzela:
ifilimu ikhombisa bhala uqine kakhulu, kuhlanganise okhiye, izindwani, noma yimuphi omunye izinto ezicijile
enzima hit, ezifana bokuwa usuka endaweni ephakeme, kuzothatha phezu, futhi mhlawumbe ngisho ephukile, kodwa screen sakho akuyona ncamashi —
omkhulu ohlabayo okucasulayo noma iyiphi uketshezi, kuhlanganise amafutha; in contact ngamanzi, ifilimu ingamniki amaconsi ukudamba futhi iyangena imbobo encane — wena nje bawasuse
ebe egcina ukukhanya kwesikrini ukuze uvikele amehlo ekukhanyeni, futhi akavumi ukuba sikhathale
akuvezi ukukhanya (ukukhanya effect), akazishiyi izigxivizo zeminwe
Ungase ucabange ukuthi lokhu ifilimu awukwazi kuzolunga. Noma kunjalo, ngaso amakhono anjalo kanye ezinjalo, futhi kunothile izingqimba! Lapha nalaphaya! ukushuba of mm 0.33 kuphela Its! Akukona ukuvimbela umsebenzi futhi inikeza wonke ngqo impendulo efanayo screen.
Le filimu Kulula ukufaka, akudingi anamathelayo ezengeziwe. Ngemva nokuxebuka amaqabunga noluncane. Ukuze ababambelela ekahle abakhiqizi enikeziwe iqoqo amathuluzi ezengeziwe: iphakethe babe usula nesasehlobo, indwangu, ifilimu dusting.
Screen — ingxenye abasengozini kakhulu efonini yakho. Ngokuthenga lokhu ifilimu, wena ahlinzeke Passport kunazo zonke ukuvikelwa kungenzeka futhi siyilondoloze ngokwabo kusukela ukuphindisela ebizayo kwesikrini.
Izinguqulo kokubili passport "okuvamile," futhi Passport Silver Edition — ukubona ukuhambisana.
ingilazi babelibiza ifilimu zokuzivikela for the screen Nillkin Amazing H for BlackBerry Passport, Esobala yesiliva Edition PSSSCRPROTGLSNK-4 ●
ingilazi babelibiza ifilimu zokuzivikela for the screen Nillkin Amazing H for BlackBerry Passport, Esobala for Passport SQW100-1 PSSSCRPROTGLSNK-1 ●
Esobala yesiliva Edition PSSSCRPROTGLSNK-4
Esobala for Passport SQW100-1 PSSSCRPROTGLSNK-1